Yini elula yezintathu zezihlalo ezinamasondo amathathu-ezinesondo ezintathu: ukubuyekezwa kwezinhlobo ezintathu
Abagibeli abathathu abanezintambo babe nesikhathi sokuzibonakalisa bevela emotweni elula neyinkinga esetshenziselwa abantwana. Amamodeli angu-3 ku-1 ashaya wonke amarekhodi wokuthengisa, njengoba akuvumela ukuthi ulondoloze ekuthengeni abahamba ngezinyawo ezimbili. Njengomthetho, zihlukile ekubukeni kwazo okunamandla.
Inzuzo ebalulekile yesimodeli esinamasondo amathathu iyindlela yokusebenza. Ungaya nayo noma ikuphi. Imodeli inesisekelo esikhulu, esivikela ukuguqulwa. Uma umgwaqo ungaphansi kwekhwalithi enhle, umgibeli angasetshenziswa ngesandla esisodwa. Uma igoqiwe, umqhubi uthatha ubuncane besikhala. Ukuze uthole intengo ungakhetha umhloli wesigcawu ku-Aport ikhathalogu.
Kulesi sihloko, sizobuka amamodeli amathathu amahle we-prints 3-in-1 ongayethemba.
Umcibisholo ngesistimu ye-modular 3 ku-1 Peg-Perego GT3
Umkhiqizi owaziwayo wezinqola zemoto unesidumo esingenakuqhathaniswa. Ngaphandle kwezihlalo zabakhubazekile, usanda kuqondisa imizamo yokukhiqiza izimoto zegesi zezingane (i-ATVs, amaloli okulahla, ama-jeeps).
I-Peg-Perego GT3 ibhekwa njengomunye wesibhamu esiphezulu esenzelwe isikhathi sasebusika / sasehlobo. Isayithi lokufika likhululekile kakhulu, lihamba kahle futhi lixakeka kakhulu.
Ikiti liqukethe izingxenye ezilandelayo:
isikhwama sezinto ezincane;
Izici eziyinhloko zesimodeli:
Umkhumbi unomsebenzi we-crib. Kukhona imilenze emibili elandayo lapho umkhumbi ungahlala khona ngaphandle kwe-chassis, uhlinzeke umuntu olala ngokugcwele endlini.
Kukhona umsebenzi wokuzalwa. Kulokhu, kusetshenziselwa izikhwama ze-semicircular.
Njengoba upholstery, i microfiber okuphefumulelwe isetshenziswa.
Ehlangothini lomkhumbi kukhona ukuvuleka okukhethekile. Ngosizo lwabo, ungakwazi ukulungisa izinga lokungenisa umoya ngaphakathi.
Umkhumbi unamathele ku-chassis ngokunyakaza okukodwa. Yenzelwe izingane ezingaphansi kuka-10 kg.
Ibhokisi lebhola lepulasitiki ligcwele ngokuphelele.
Isihlalo semoto sinezindlela ezintathu ezikhulayo.
Kusetshenziselwa indlela yokuqamba ama-five.
I-adjuster eguquguqukayo ikuvumela ukuba usethe indawo yesihlalo endaweni efunayo.
Isondo langaphambili lingavaliwe ezindaweni ezimbili.
Isisindo somgibeli siyi-19 kg (ukulala - 5,5 kg, isihlalo semoto - 5 kg, umgudu wokuhamba - 18 kg).
Intengo yama-ruble angu-65-70 ayizinkulungwane.
I-X-Lander X-fit - stroller kunoma yisiphi isimo sezulu
Umkhiqizi wasePoland u-Deltim ubelokhu ekhiqiza imoto yamantombazane iminyaka engaphezu kwengu-40. Ngokuvamile, abazali banesithakazelo ezintweni, ezinabantwana abangaphansi kweminyaka emithathu ubudala. Umbusi ngamunye uhlangabezana nokuhlolwa okuningi. Umkhiqizi uphikisana nemikhiqizo eminingi yaseYurophu.
Isibonelo X-Lander X-fit sikhanya kakhulu futhi sikhululekile, esifanele izingane kusukela ekuzalweni.
i-adapters yokufakwa kwesisu kanye ne-autoarmchair.
Umklamo wenzelwe izingane kufika ku-9 kg.
I-adaptha isetshenziselwa ukufaka umkhumbi.
Kungenzeka ukuthi ulungise ukuvimbela ikhanda.
Ngaphakathi kwe-hood kuyisifenqo se-ventilation.
Isihlalo sishintsha endaweni "yokuhlala".
Isondo langaphambili liphindwe kabili.
Isakhiwo esenziwe nge-aluminium.
Iqoqo lezinqola zeqoqo 0+.
Ihambisana namazinga okuphepha aseYurophu (ECE R44 / 04).
Isisindo se-stroller - 11 kg (isisindo somkhuhlane - 4 kg).
Isihlalo semoto singafakwa ku-chassis.
Intengo ingama-ruble angu-40-45 ayizinkulungwane.
I-Hauck Viper TrioSet - ikhwalithi yaseJalimane
I-Hauck yenkampani ithengisa imoto yamantombazane kanye nezikebhe, amabhayisikili. Kusukela ngo-2004, kuye kwaba ukukhiqiza abahamba phambili ngaphansi kwe-TRAXX neMinitraxx brand. Le nkampani ibuye ibe ne-Rockstar-Baby brand.
I-Hauck Viper TrioSet ihlanganisa izingxenye ezilandelayo:
Umkhumbi wenziwe ngezinto ezibonakalayo ezingasuswa ukuze zihlanzwe.
I-headrest ingashintshwa (izikhundla ezimbili).
Kukhona ukuvuleka okukhethekile kokulawula izinga lokuphumula.
Umthamo wendawo yokuhamba ulungiswa kusuka ku-111-153⁰.
Ukuvikelwa okukhethekile kwemithelela yecala.
Kukhona i-brake yokupaka.
Ibhasikidi lesishukela. Isisindo se-stroller - 9 kg (imoto isisindo - 4 kg)
Intengo ayi-25-30 ama-ruble ayizinkulungwane.
Phakathi kwalezi zithombe ezintathu ezichazwe, ungakhetha umqhubi ohamba kahle nesihlalo sabakhubazekile besabelomali. Wonke amamodeli ahambisana nezindinganiso zekhwalithi zaseYurophu futhi ayasebenziseka kakhulu.
Imidlalo entsha yonyaka omusha kanye nemincintiswano yabantwana besikole
Indlela yokukhetha i-ski eqondile yengane yakho
Umzali hyperopece: izimpawu ezintathu zokukhathazeka
Jabulela amaholidi amahle ebusika
Ukuya kuphi ngezimpelasonto nezingane?
Indlela yokubuyisela imishanguzo emva kwebusika eside
I-curd ne-apula pie
Indoda iyayithanda amehlo, nowesifazane onendlebe
Ama-noodle ane-sauce ye-tuna
Umsebenzi wesikhathi sesikhathi: okudingayo ukwazi
I-Horoscope ye-Capricorn-abesifazane ngoNovemba 2016
Uma unesifo sokuhlukunyezwa kwengqondo
Kufanele uziphathe kanjani ngenyanga yokuqala yokukhulelwa?